डाक्टरलाई आफूलाई भइरहेको दुःखाईबारे कसरी बताउने ? | Nepali In Japan
‘इताई’ शब्दको अर्थ पीडा भन्ने हुन्छ । जापानमा डाक्टरकहाँ जाँदा धेरै जसोले भन्ने पहिलो शब्द यही हो । यो एउटा शब्द धेरै थरी अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर डाक्टरकहाँ जचाँउन जाँदा यो एउटा शब्द बोलेर मात्रै हुँदैन । आफूलाई भइरहेको पीडाबारे स्पष्ट रुपमा बताउन अझै धेरै शब्दहरुको खाँचो पर्दछ । डाक्टर वा डेन्टिष्टले तपाईलाई पीडाबारे पीडा सहनै नसक्ने छ कि अलि अलि सहन सक्ने खालको छ ? कुनै बेला धेरै दुःख्ने अनि कुनै बेलामा दुःखाई कम हुने खालको पो छ कि ? भनेर सोध्न सक्छन् । अंग्रेजीमा जस्तै जापानीमा पनि पीडाको व्याख्या गर्न विविध शब्दको प्रयोग गरिन्छ । यी सबैबारे थाहा पाइराख्नु उपयोगी हुन्छ । नत्र डाक्टरलाई पीडाबारे बताउँदा के भन्नु अनि कसरी भन्नु भन्ने टाउको दुखाई सधैं रहन्छ । जापानी भाषमा फरक खालको पीडाको वर्णन गर्न अर्थानुकरण (ओनोमातोपाइया)को प्रयोग गरिन्छ । यसका केही अपवादहरु पनि छन् । यसका केही उदाहरणहरु तल दिइएको छः
ズキズキ(जकी–जुकी) – यो शब्द प्रायः दाँतको पीडाबारे बताउन प्रयोग गरिन्छ । यसले तेज र सुस्त दुबै खालको पीडाको बयान गर्दछ ।
シクシク(शिकु–शिकु) – यो कहिलेकाँही पेटको पीडा भन्न प्रयोग गरिन्छ । यसले भने हल्का तर लामो समयसम्मको पीडाको बयान गर्छ ।
ガンガン(गान–गान) – यो विशेषतः टाउको दुखाईबारे बताउन प्रयोग गरिन्छ । यसले सहनै नसक्ने खालको पीडाको व्याख्या गर्छ ।
キリキリ(किरी – किरी) – यो चाँही आन्द्रा बाउडिने लगायत अत्यन्त पीडादायक अवस्था बताउन प्रयोग गरिन्छ ।
ピリピリ(पिरी – पिरी) – यो नेपाली भाषामा टोक्यो – घोप्यो भन्ने शब्द जस्तै हो । यसले सुईले घोप्दा उत्पन्न हुने अनुभूतिको बयान गर्छ ।
チクチク(चिकु – चिकु) – यो पनि पिरी–पिरी जस्तै हो । पिरी–पिरीले पोल्दा हुने दुखाई ब्याख्या गर्छ । तर चिकु-चिकु चाँहि विशेषगरी गहिरो खालको पीडाको व्याख्या गर्न प्रयोग गरिन्छ । यो शब्दले पाछेर ठाउँमा कन्याइरहनु पर्ने वा अप्ठयारो अवस्थाको पनि बयान गर्छ ।
ドーン(दो न) – पीडा हल्का खालको छ भन्नका लागि यो शब्दको प्रयोग गरिन्छ ।
キー(कि) – यो चाँहि तिखो पीडाको लागि प्रयोग गरिन्छ ।
キュー(क्यु ) – यसले महिनावारी हुँदा खेरीको दुःखाईको अवस्था बताउँछ ।
तपाईहरुले मनमा सोच्नु पर्ने कुरा के हो भने यी शब्दहरु शुरु (する) भन्ने शब्दसँग प्रयोग गरिन्छ । जस्तैः “歯がズキズキする” (हा गा जुकी–जुकी शुरु) अर्थात् मेरो दाँत दुखीरहेको छ । यस्तो खालको शब्द निर्माण गर्ने अर्को तरिका भनेको चाँहि वाक्यका पुछारमा ‘तो इताई’ शब्द जोड्ने हो । जस्तैः “歯がズキズキと痛い” (हा गा जुकी–जुकी तो इताई) ।
यी बाहेक अन्य शब्दहरु पनि छन् । प्रायः जसो जापानीहरुले आफ्नै शब्द बनाउँछन् । जापानी मातृ भाषा बोल्नेहरु माझ अर्थानुकरण गर्छन् । तर जापानी भाषा द्वितीय भाषा हुनेका लागि भने यी शब्दको मौलिक अर्थ बुझ्न कठिन हुन पनि सक्छ । यद्यपि, आजको यस लेख पढेपछि अर्को पटक डाक्टरको क्लिनिकमा जाँदा तपाईलाई आफूलाई भइरहेको पीडाबारे बताउन निकै सहज हुनेछ ।
Prevजापानमा वर्किङ भिसा नवीकरण र यससम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
Nextजापानीमा टाइप गर्दा समय बचाउने तरिका